Izindaba - 3D Fiberglass Nokwelukiweyo Indwangu
Ukwakhiwa kwendwangu ye-3-D spacer ngumqondo osanda kuthuthukiswa. Izindwangu zendwangu zixhunywe ngokuqinile komunye nomunye yimicu emile yinqwaba ehlanganiswe nezikhumba. Ngakho-ke, indwangu yesikhala esingu-3-D inganikeza ukumelana okuhle kwe-skin-core debonding, ukuqina okuhle kakhulu nobuqotho obuphakeme. Ngaphezu kwalokho, isikhala sokwakhiwa singagcwaliswa ngamagwebu ukuhlinzeka ngokusekelwa okuhambisanayo ngezinqwaba eziqondile.
Indwangu yesikhala esingu-3-D inezindawo ezimbili zendwangu elukiwe e-bi-directional, exhunywe ngemishini ngezinqwaba ezilukiwe eziqondile. Futhi izinqwaba ezimbili ezimise okwama-S ziyahlangana zenze insika, emise okwe-8 ohlangothini lwe-warp futhi i-1 emise ohlangothini lwe-weft.
Indwangu ye-3-D spacer ingenziwa nge-fiber fiber, i-carbon fiber noma i-basalt fiber. Futhi izindwangu zabo ezihlanganisiwe zingakhiqizwa.
Ububanzi bensika ukuphakama: 3-50 mm, ububanzi bobubanzi: ≤3000 mm.
Imiklamo yamapharamitha wesakhiwo kufaka phakathi ukuminyana kwe-areal, ukuphakama nokusabalalisa kwabantu kwezinsika kuyaguquguquka.
Izinhlanganisela zendwangu ye-3-D spacer inganikeza ukumelana okuphezulu kwesikhumba-core debonding nokumelana nomthelela nokumelana nomthelela, isisindo esincane. ukuqina okuphezulu, ukwahlukanisa okushisayo okuhle kakhulu, ukufakwa kwe-acoustic, njalonjalo.
Isikhathi Iposi: Mar-09-2021